Khadka Dhiiga Talyaaniga- Sida Looga Faa'ideysto Dhalashada Faraca
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Khadka Dhiiga Talyaaniga- Sida Looga Faa'ideysto Dhalashada Faraca
Fikradda jinsiyadda asal ahaan waxay soo ururisay caan sannadihii la soo dhaafay. Dadka Mareykanka ah oo xididadooda dib ugu celinaya qeybaha kale ee adduunka ayaa doonaya in ay dib u soo ceshadaan oo ay nolol ka bilaabaan dhulka ay asal ahaan ka soo jeedaan. Talyaanigu wuxuu ka mid yahay meelaha caanka ah ee bixiya ikhtiyaarka Jure Sanguunis ama dhalashada asal ahaan. Haddii aad raadin karto oo aad ansixiso dhiiggaaga gudaha dalka, waxaad xaq u leedahay inaad codsato dhalasho. Qaybta ugu wanaagsani waa in ay tahay bilow uun sidaad xaquuqda ugu gudbin karto jiilalka soo socda.
Doorashadu waxay u egtahay mid aad u fiican si aad u bilowdo safarkaaga socdaalka, laakiin waxaad u baahan tahay inaad fahanto dhawr waxyaalood ka hor intaadan hor marin. Waad awoodaa akhri hagahan buuxa haddii aad rabto inaad bilowdo nidaamka codsiga oo xaqaaga sheega. Qadka awoowahaa wuxuu ku shaqayn karaa raallinimadaada, markaa iska hubi inaad u isticmaasho faa'iidadaada. Aynu sharaxno sida aad uga faa'iidaysan karto inaad ku hesho dhalashada Talyaaniga asal ahaan.
Ogow xeerarka u-qalmitaanka
Dhalashada talyaaniga ee asal ahaan ka soo jeeda waxay heli karaan codsadayaasha iyada oo loo sii marayo awowgood, iyada oo aan xaddidnayn tirada jiilasha.. Waxay la macno tahay inaad awooddo ka sheeg waalidkaa, awoowayaasha, awoowayaasha iyo awoowayaasha, iyo wixii ka dambeeya. Waa kuwan xeerarka u-qalmitaanka ee ay tahay inaad raacdo si aad u samaysato cabasho:
Haddii aad ku dhalatay waalid (iinta) Talyaani ah ama lagu korsaday si aad u yar (da'da ka hooseysa 21 waxaa loo arkaa mid aan qaan gaarin haddii lagu korsado ka hor 1975 iyo wixii ka hooseeya 18 jir haddii lagu korsado 1975 ka dib)
Waalidka/Awoowga talyaaniga waa in aanu ku qaadan jinsiyad dhalasho wadan kale marka ilmahoodu dhasho
Aabuhu waa inuu ahaado muwaadin Talyaani ah ka dib midowgii dalka 1861kii
Faham waxyaabaha ka reeban
U-qalmitaanka dariiqa wuxuu u muuqdaa mid fudud sida ay u dhasheen waalidiinta Talyaani. Laakiin waxaa jira waxyaabo ka reeban xeerka. Haddii aad ku dhacdo mid ka mid ah qaybahan, waa inaad raadisaa hab kale oo aad ku codsato. Waa kuwan waxyaabaha ka reeban xeerka guud:
Awoowgii Talyaaniga u dhashay wuxuu qaatay dhalashada ka hor Juun 14, 1912
Waxa aad dhashay naag Talyaani ah ka hor 1948kii
Waxaad doonaysaa inaad ku dalbato khadka hooyada, oo leh gabadh kor u kacday oo dhashay ka hor Janaayo 1, 1948
Haweenka Talyaaniga looma ogola inay soo gudbiyaan xuquuqdooda dhalasho ka hor 1948-kii, taasoo sharciga ka dhigtay mid takoor ah. Sixitaan danbe ayaa u ogolaanaysa codsadayaashan oo kale inay ku codsadaan nidaamka garsoorka ee hoos yimaada Xeerka 1948.
Tallaabo hore u dhig oo wata dukumeenti
Haddii aad u qalanto jidka, waxaad sii wadi kartaa nidaamka. Laakin waxa macno leh in aad bilawdo bilawga dukumeenti ururinta sababtoo ah waxaad u baahan doontaa liis dheer oo geedi socodka ah. Ugu horreyn, waxaad u baahan doontaa shahaadooyinka dhalashada, dhimashada, guurka, iyo jinsiyadda si loo xaqiijiyo xiriirka awoowahaa. Waxaad uga baahan doontaa goobta talyaaniga ee awoowgaa iyo sidoo kale waddanka jinsiyadda. Waxa laga yaabaa in ay adagtahay in laga ilaaliyo xafiisyada maxaliga ah, laakiin waa in aad soo iibsatid habsocodka. Diiwaanada muhiimka ah ee Maraykanku soo saaray waa in la xaqiijiyaa, la tarjumaa, oo la rumeeyaa si loogu tixgeliyo sharci habka.
Filasho cad qabta
Markaad hesho dukumeentigaaga meesha, waxaad ku dalban kartaa dhalashada Talyaaniga asal ahaan. Waa inaad buuxisaa foomka codsiga oo aad u gudbisaa qunsuliyadda Talyaaniga ee kuugu dhow si aad u bilowdo. Waxay ku siin doonaan ballan aad ku soo gudbiso dukumentiyada iyo u soo bixitaanka waraysiga. In kasta oo ay tahay tillaabadaada ugu horreysa ee a baasaboor labaad, waxaad u baahan tahay inaad ka yeelato rajooyin cad oo ku saabsan habka iyo waqtiyada. Ballantu waxay qaadan kartaa ilaa hal sano, iyadoo ku xidhan tirada codsiyada ee hadda socda. Waxaad ka fiirsan kartaa inaad ka dalbato gudaha Talyaaniga si aad u dedejiso safarka. Xitaa waxaad ka sameysan kartaa degenaansho sharci ah halkaas inta lagu jiro wakhtiga habaynta.
La shaqee khabiir
Way fiican tahay inaad la kaashato khabiir dhalasho Talyaani ah si uu kaaga caawiyo habka. Waxay ku hagi karaan oo ay ku caawin karaan marxalad kasta, iyagoo hubinaya safar sahlan oo sahlan oo hoos loogu socdo khadka. Xirfadle maxalli ah ayaa leh nooca saxda ah ee isku xirka, sidaa darteed ka helidda dukumentiyadaada gudaha Talyaaniga way fududaanaysaa. Waxay sidoo kale hubin doonaan in dhammaan dukumeentiyada kale ay jiraan oo aysan jirin khaladaad iyo khaladaad ku jira codsiga. Lahaanshaha khabiir ku maaraynaya habka waxa kale oo ay ku siinaysaa kalsooni iyo xasilooni maskaxeed.
Dhalashada asal ahaan waa habka ugu fudud ee aad ku geli karto Talyaaniga oo aad nolol cusub uga bilaabi karto waddankii awoowayaashaa. Laakiin geeddi-socodku wuxuu noqon karaa mid dheer oo adag, gaar ahaan haddii aad u socoto adigoon khibrad xirfadeed lahayn. Ku biir gacmaha khabiir ku takhasusay, oo waxaad gaari doontaa hadafkaaga xitaa ka hor intaadan filaneynin.